Lewandowski, Conte, Neymar, Courtois, Enrique & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga – Kooxda.com
Home 2018 February Suuqa, Wararka Maanta Lewandowski, Conte, Neymar, Courtois, Enrique & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga
Lewandowski, Conte, Neymar, Courtois, Enrique & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Bayern Munich iyo xulka qaranka Poland ee Robert Lewandowski ayaa iska diiday heshiis cusub oo ay u soo bandhigtay kooxdiisa Bayern Munich isaga oo haatanba wadahadalo Rasmi ah la furay kooxda Real Madrid si uu ugu biiro Xagaaga (Sky Germany).
Kooxda chelsea ayaa dib u dhigtay wadahadaladii heshiis kordhinta ee ay kula jirtay goolhayaha kooxda ee Thibaut Courtois ilaa iyo kadib kulanka Barcelona iyo Leicester city (London Evening Standard).
Luis Enrique ayay tahay in uu aqbalo in uu hoos u dhigo mushaharkii uu ka qaadan jiray kooxda Barcelona si uu tababare ugu noqo kooxda Chelsea (Telegraph).
Kooxda Liverpool ayaa ugu cad-cad saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Napoli ee Jorginho marka la gaaro suuqa kala iibsiga xagaaga (Star).
Kooxda Arsenal ayaa doonaysa saxiixa xiddiga reer Uruguay una ciyaara kooxda Atletico Madrid ee Maria Gimenez (Sports Illustrated).
Kooxda Man United ayaa ku dhaw in ay iska fasaxdo xiddig daafaca uga ciyaara ee Matteo Darmian xilli uu xiiso ka helayo kooxda Juventus (Star).
Kooxda Man United ayaa qiratay in ay ku fashilmeen in ay xiddiga khadka dhexe ee Marouane Fellaini ku sii hayaan Old Trafford (Mirror).
Kooxda Juventus ayaa diyaar u ah in ay dalab weyn miiska u saarto xiddiga khadka dhexe ee Kooxda Liverpool ee Emre Can laakiin doonaysa Jawaab deg-deg ah 7-da maalmood ee soo socota (Mirror).
Ilo wareedyo ku dhaw xiddiga reer Brazil ee Neymar ayaa sheegay in uu xiddigu doonayo in uu qaliin maro kadib markii ay lugtu jabtay si uu Fursad ugu helo ciyaarista koobka adduunka (AS).
Si kasta ha ahaatee tababaraha kooxda PSG ee Unai Emery ayaa beeniyay in uu xiddigu mari doono qaliin isaga oo sheegay in uu ka qayb qaadan karo kulanka champions League ee ay La ciyaari doonaan Real Madrid 6 march (Mundodeportivo).
Kooxda Arsenal ayaa si lama filaan ah liiska tababarayaasha ay doonayso ku dartay tababaraha kooxda chelsea ee Antonio Conte kaas oo laga yaabo in uu isaga tago kooxda chelsea dhamaadka xilli ciyaareedkan (Star).